ကို ABS ပစ္စည်းလှိုင်းနှုန်းသည် UHF အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Anti-သတ္တု Tag ကို, ABS Material UHF High Temperature Resistant Metal Tag, UHF High Temperature Resistant ABS Material Anti-Metal Tag, ABS Material High Temperature Resistant UHF Anti-Metal Tag
 » RFID ဆကျကပျ Tag ကို » anti-သတ္တု Tag ကို
ကို ABS ပစ္စည်းလှိုင်းနှုန်းသည် UHF အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Anti-သတ္တု Tag ကို
anti-သတ္တု Tag ကို ABS Material 916MHZ Anti-metal Tag, ABS Material G2 Protocol Anti-metal Tag, ABS Material High Temperature Resistant UHF Anti-Metal Tag, ကို ABS ပစ္စည်းလှိုင်းနှုန်းသည် UHF အမြင့်အပူချိန်ကိုခံနိုင်ရည် Anti-သတ္တု Tag ကို, ABS Material UHF High Temperature Resistant Metal Tag, UHF High Temperature Resistant ABS Material Anti-Metal Tag
ပုံစံ: BY4403 series
chip မော်ဒယ်: ဂြိုလ်သား h3 / Impinj M5, စသည်တို့ကို.
ဆက်သွယ်ရေး protocol ကို: EPC အတန်းအစား 1 ဗိုလ်ချုပ် 2, ISO18000-6C
စွမ်းဆောင်ရည်: 800 bytes
ဒေတာလုံခြုံရေး: 32-နည်းနည်း OTP; ရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနှင့်အတူ
anti-တိုက်မှု: စံ Anti-တိုက်မှုယန္တရား
R / W ကိုအကွာအဝေး: 10 မှတက် (စာဖတ်သူကိုအာဏာနှင့်အင်တင်နာပေါ် မူတည်.)
ပစ္စည်း: မြင့်မားတဲ့အပူချိန်အင်ဂျင်နီယာကို ABS ပလပ်စတစ်
အဓိကထုတ်ကုန်အရွယ်အစား: 154× 32 × 10 မီလီမီတာ,135× 22 × 12mm,78× 32 × 10 မီလီမီတာ,85× 25 × 4.5mm, စိတ်ကြိုက်
installation နည်းလမ်း: ဝက်အူ / စတစ်ကာ
BY4403 series ABS Material UHF High Temperature Resistant Anti-Metal Tag, specially designed for complex environments such as metals, which can effectively prevent metal interference with RF signals. With long reading distance, high sensitivity, excellent physical properties, ရေစိုခံ, Anti-တိုက်မှု, durable and so on.
ဝင်ခွင့်လက်မှတ်, management and tracking of fixed assets management, medical device management, mold tracking, logistics management, power grid inspection, high-speed rail inspection management, metal shelves and metal goods identification and tracking inametal environment.